Bravo Garden 4 * (Tunisia). Tunisia amahhotela "izinkanyezi 4"
izindawo Foreign exotic abe kufinyeleleke kalula umuntu wanamuhla. Ngezinye izikhathi ukuphumula ngaphandle yethu ezweni ezishibhile ezifuywayo zokungcebeleka. An kakhulu isibonelo okungukuthi Tunisia amahhotela losendzaweni eNyakatho Afrika. Ikakhulukazi ocebile ingqalasizinda izivakashi e Hammamet, kukhona lenqwaba amahhotela, kodwa Bravo Garden 4 * (Tunisia) ufanelwe ukuqashelwa okukhethekile.
Ihhotela Itholakala Yasmine wesifunda. Ibanga kusukela ehhotela kuya sezindiza Enfidha kuyinto 39 km. Indawo Bravo Garden 4 * (Tunisia) ivumela isikhathi esifushane ukufinyelela ukuzijabulisa isikhungo esikhulu iCarthage Land, lapho babe izigaba fun ezehlukene izakhamuzi. izivakashi Ukugembula Ungazama isiphetho sabo ku-Casino La Medina. Ntambama embhangqwaneni oqomisanayo ukungcebeleka kanye Port Yasmine, ejabulela imilingo emkhathini romantic.
I eseduze beach yomphakathi. Ngezinye ibanga 820 amamitha kukhona yokudlela Pomodoro, okuyinto okungukuthi idume yayo Italy cuisine kwasolwandle izitsha. Uma ufisa ndizela Tunisia Amahhotela 4 izinkanyezi ngayo ukunikezwa ezithandekayo opharetha hambo, njengoba zitholakala eduze lolwandle futhi ezikhangayo ezihlukahlukene zezwe. Ngokuvamile, isimiso "Zonke womanyano" emahhotela enjalo, okuyinto njalo ngokufuna abahambi.
Ubude Bravo Garden 4 * (Tunisia) has 220 amafulethi ukhululekile, zonke ifakwe air conditioning, ucingo nge ukufinyelela omhlaba kanye ifenisha yesimanje. Ingaphakathi stylish lihlotshiswe ngemibala ezithambile ukudala indawo emnandi yokuphumula. Igumbi ngalinye has a kuvulandi noma ithala (kuncike esigabeni efulethini), njengoba kudingekile ukuba ithelevishini satellite. Phakathi zonke izici 1 isiteshi Russian. On isicelo kungaba zithunyelwe ku mini-bar, kodwa le sevisi esikhokhelwayo. amakamelo Quadruple eqondene imikhaya. Indlu yangasese kungenziwa ifakwe eshaweni noma ubhavu ashisayo. Ukubhema nokuba kanye nezilwane akuvunyelwe nakancane. Ihhotela unomthetho - unganikezi Embhedeni owenezelwe egumbini. Ungakwazi ngisho 'enonya "ukuza Tunisia, Bravo Garden nhlo amafulethi khulula ngenxa yokuthi isibalo sabo esikhulu.
Ekhatsi Hammamet Bravo Garden 4 has a simiso "Zonke womanyano", okuyinto kakade emananini emithathu ngesikhathi sakusihlwa futhi amanani angenamkhawulo iziphuzo ezithile. Ungakhokhela uhambo, ezazihlanganisa kuphela intengo, kodwa kulokhu kuyodingeka bakhokhe ukudla wedwa. Uma wayefisa, imali yakho kufanele uthathe ithikithi, okubandakanya okungenhla ugesi uhlelo.
Izivakashi ukudla okunhlobonhlobo ehlanganisa izitsha kazwelonke kanye zaseYurophu. On the lezitsha kukhona njalo inyama, inhlanzi, izithelo nesiphuzo fresh. Uma uhlola ebhaliwe ehhotela ukubuyekezwa, Bravo Garden (Tunisia) iba abafiseleka nakakhulu ndawo yokuphumula. Lapha uzobona ukudla kuphela olinganiselayo futhi unempilo, okuyizitshalo ezenza umzimba amavithamini namaminerali. Ezinganeni ezincane ayatfolakala izihlalo.
Ngenxa Ihhotela Bravo Garden ingqalasizinda 4-ocebile, Tunisia isibe omunye izindawo avakashelwa njalo. On the indawo kukhona ichibi elikhulu ongaphandle abadala, kukhona ingxenye encane ukugeza izingane. izihlalo ukhululekile nezambulela mahhala izivakashi. Indoor pool evuthayo ikuvumela ukubhukuda wenze aerobics emanzini, ngisho umkhuhlane omubi.
Le restaurant inikeza izivakashi zalo ukunambitha ukudla elimnandi futhi okumnandi ngemali eyengeziwe. Kusihlwa esikhungweni uvune kakhulu abantu abahlala kulo muzi Bravo Garden, ujabulela umculo emnandi futhi okuphumuzayo neziphuzo. Enye yokudlela itholakala endaweni evulekile, it has a isigaba à la Carte, futhi kudinga i-aphoyintimenti. Kuleyo ngosi uyothola uzame ezahlukene inyama izitsha. isikhonzi okuzithobile ziyonikela iziphuzo efanelekayo.
Ekuseni zezivakashi ezikhangwa ezimnandi ikhofi iphunga esitolo. Ukuqala kabusha isiphuzo, kanye fresh namakhekhe uyonika okuhle isimo usuku lonke. Coffee ukwenziwa kuphela kusuka high quality okusanhlamvu ngqo emehlweni ikhasimende. amasevisi lesikhungo abafakiwe "Zonke womanyano". Kukhona cafe namaMoor, lapho njalo uya inqwaba izivakashi.
Ihhotela has sandy beach ayo, akhiwe kude 200 meters kusukela isakhiwo main. Ukuze ukusetshenziswa sun bed nezambulela azidingeki ukwenza imali.
Yokulinda ivulekile yehhotela Hammamet Bravo Garden 4 ingakwazi ngesivinini internet ngokusebenzisa inethiwekhi ye-Wi-Fi. Le sevisi nhlobo.
Njengoba kunjalo kubo bonke abanye ehhotela, lo wamukelekile edilini ubusuku nemini, okwenza kube lula nezivakashi ezingaba khona, owafika ebusuku. Ngesikhathi reception, ephephile, lapho izivakashi nizoqhubeka yabo imali nezinto eziyigugu. Le sevisi futhi osebenzayo.
Singcoliswe izingubo kufanele bafake izingubo gumbi. ukugeza Izindleko incike isisindo elondolo.
yokupaka Mahhala ukhulula izivakashi ezivela izinkinga indawo yemoto. Abasebenzi hotel unesibopho ukuphepha imoto.
Uma abaqashi wathenga ukudla ekamelweni, uzokhokhelwa, kungakhathaliseki ukuthi uhlelo ugesi. Lokhu kusebenza futhi iyiphi enye insizakalo ezengeziwe.
imihlangano yebhizinisi, ezinsuku zokuzalwa kanye neminye imicimbi owaqhutshwa kuleli hholo lenkomfa enikeziwe ehhotela bese ekukhokhela.
Amagumbi bahlanza nsuku zonke, okuyinto kwakha izimo zokuphila ngokunethezeka. Umbhede nelineni washintsha kanye ngesonto. ungakwazi oda yokuhlanza ezengeziwe uma kudingeka, kodwa le sevisi kumelwe nalo likhokhelwe.
Izisebenzi tipping ziyisisekelo izifiso zakho siqu.
Uzofika ehhotela, izivakashi ikakhulu uvakashele SPA-isikhungo ezindawo ngezindawo, lapho ungakhululeka, bayakhohlwa izinkinga zamanje bese nalokho injabulo engenakuqhathaniswa. Lapha uzokwenza massage omkhulu, usebenzisa ezihlukahlukene izimfanelo, ezifana miniature kwamatshe ashisayo kuphuma amafutha anephunga elimnandi.
Ukuze abagembuli Ilungile amabhiliyade, imicibisholo kanye igalofu club etholakala eduze ehhotela. imishini slot izohlola ezingeni inhlanhla izivakashi. Ithenisi yetafula nokusiza ulondoloze isimo esihle ngokomzimba lapho siseholidini. Ngesikhathi sebehlezi ogwini, izivakashi ungakwazi ukujabulela umdlalo we-basketball noma volleyball.
Kukhona club mini izivakashi abasebasha, yakhelwe ukuze ajabulise izingane ezineminyaka engu-4 kuya kwezingu-12. Aqhuba izifundo iqembu imidlalo interactive njengoba izingane ukuxhumana nabanye. Lapho isicelo, ungasebenzisa imisebenzi oqeqeshiwe, ngubani banakekele ingane yakho.
Abathengi bayojabulela izitolo eziningi izitolo ezidayisa izinto eziyizikhumbuzo zitholakala esizeni. Lapha abangayithola imifanekiso namawashi ahlekisayo, isitsha sezimbali, izingubo, izitsha, isikhumba izimpahla nokunye okuningi.
Izivakashi njalo ukuchitha isikhathi esiningi ngibhukuda echibini noma ukwenza aerobics khona ngaphansi kokuqondisa eduze i Umqeqeshi abanolwazi. Mahhala ukusetshenziswa ejimini ifakwe yesimanje imishini.
Animation ayivumeli balahlekelwe izivakashi ehhotela: imincintiswano nsuku zonke ne iqhaza zezivakashi nabathandi izigcawu ezihlukahlukene. Abasebenzi imikhondo umdanso ezihilela wonke umuntu. Izingane ayeba a okhethekile nge Costumed ukusebenza.
Hammamet Bravo Garden 4 sizonikeza izivakashi nge nightlife okuthakazelisayo. Njalo kusihlwa egumbini wahlomisa ngokukhethekile futhi i-disco.
Kusayithi 3 bar. Esinye isici ongaphandle indawo yokubhukuda. It inikeza izivakashi iziphuzo khulula, ukuvakasha esihlinzeka simiso "Zonke womanyano", bonke abanye kufanele ukhokhe. Eyesibili inikeza isiphuzo esiqabulayo (ngaphandle kobukhona utshwala) ngemali ethile. Ngekhulu lesithathu, ungathenga iziphuzo kanye notshwala. Itholakala isakhiwo main Bravo Garden. Disco ibha egumbini ehhotela nsuku edonsela izivakashi nempahla yalo yokuqala. Lapha izivakashi ungakwazi ukuthenga cocktail noma ngaphandle utshwala ke.
Ukuze abe nolwazi oluphelele ngakho iningi ehhotela, kufanele ukuzwa imibono izakhamuzi zangaphambili. Ngakho, isifundo libuyekeza. Bravo Garden izivakashi eziningi ngenxa umsebenzi omuhle kakhulu izisebenzi. Abantu ukudumisa ingqalasizinda ehhotela kanye nezinsizakalo. Ethi nightlife gay ehhotela. Zonke izimenywa bhala ukuthi kungenzeka ukuthi ube nesikhathi esihle, ngeke ngale Bravo Garden (Hammamet). abaqashi Owabe efana ekhishini ehlongozwayo kanye nezikhungo eziningana elise endaweni ehhotela, okukuvumela ukushintsha endaweni ayijwayele ukuchitha isikhathi sakho. Umkhaya ukunikezela ukubuyekezwa kwawo izithombe esisiza ehlukahlukene ezokungcebeleka, abadala nje kuphela kodwa futhi izivakashi abasha. Futhi, ukunaka ezikhethekile kunikezwa ukuhlanza amabhishi nokushona kwelanga esihle, okuyinto enikeza ukuvikeleka for ebhukuda nezingane.
Agents ukunikela ongakhetha sokufaka eziningana kulabo abanentshisekelo iholide e Tunisia ( "zonke okufakayo"), kodwa Izivakashi eziningi ukukhetha Bravo Garden. Intengo Tour kuhluka 1500 kuya ruble 5000 ngosuku. Izindleko incike khona kwesimiso "Zonke womanyano", inani lezinsuku wachitha ehhotela, asesigabeni kanye indiza ibanga. Kusayithi ehhotela kukhona ulwazi njalo ngaphezulu. Kukhona futhi, uma babefisa, ungenza inombolo yabo ozithandayo. Uma sikhuluma travel ejensi, kufanele kukhunjulwe ukuthi "ngomzuzu wokugcina 'amathikithi zihlale ishibhile kuka isiphakamiso sokuqala, kodwa ngezinye izikhathi usuku Ukuhamba asishayisani abanekhono isivakashi. inketho okunjalo esihambelana abantu isikhathi esikhulu iholidi noma ingxenye isikhathi.
Engakabi yayo, Bravo Garden isibe omunye main ezikhangayo Tunisia. Yena alinakunikezwa qualifications elinganiselwe futhi bakubize ngokuthi umndeni noma ehostela intsha, njengoba kuba jikelele. Lapha wonke umuntu uzothola okuthile angayithandi. Lapho kubhekwa ngokuya ukuthandwa Tunisia amahhotela "4 izinkanyezi" bayindlala kakhulu, ngokuletha lizwe omunye wabaholi emkhakheni lokuzilibazisa.
Amahhotela ethandwa kakhulu Balashikha
Amahhotela e-Russia - esivulekile umphefumulo Russian
Amahhotela 2 *: Gaffinos Beach Resort Indawo abantu, India, Goa. Izithombe kanye nokubuyekeza
Umkhaya Umhlaba Aqua Beach 4 * - ihhotela engcono imindeni
I-Holiday Island Resort Spa (i-Maldives / iAri Atoll): izithombe nezibuyekezo kuzivakashi.
Palm ePharadesi kuyona 3 * (Thailand, Krabi): izinhlobo amakamelo, imisebenzi, ukubuyekeza
Kwesobunxele owumthelela Dnieper. Nemingenela esisempumalanga yoMfula Dnieper
Yokuziphatha yokuxhumana ibhizinisi ezweni lanamuhla
Valeria Gai Germanicus: biography namafilimu ngokuhlanganyela kwakhe
Ngesilwane esifuywayo - ehhovisi isisekelo ngesikhathi ibhizinisi
Ukudubula eMoscow ngo-1999 emkhakheni yokuhlala
Shona eliqhaqhazelayo: Izimbangela zesifo. Kusho ukuthini eliqhaqhazelayo ikhanda futhi kanjani ukuqeda kwalo?
Vdovichenkov uVladimir. Filmography ngokumelene ngemuva kwenkathi
Abadlali of the ifilimu "Apocalypse" futhi indaba emfushane isithombe. Umlando impikiswano kunawo Hollywood ifilimu zomlando
Khetha umbhalo. Okugqamile. HTML-manual Wabasaqalayo
Izilokotho zosuku lokuzalwa Zezıhlabane carnations mthetho kamasipala
Izithombe incazelo abalingiswa. "Umlobokazi 'A. N. Ostrovskogo
Japanese Perm: izici nezinzuzo ubuchwepheshe